Sidee loo rakibaa Docker on Raspberry pi leh Raspbian? | Laga soo bilaabo Linux
Sidee loo rakibaa Docker on Raspberry pi leh Raspbian?
Docker waa nidaam weel inaadan u baahnayn ilo badan si aad u maamusho konteynarada, sidaa darteed Waa wax aad u fudud oo sidaas darteed Docker wuxuu noqon karaa musharax ku habboon horumarinta arjiga webka iyo tijaabinta Raspberry Pi.
Dabcan, waxay samayn kartaa waxyaabo kale sida socodsiinta adeegaha webka, server wakiil ama server database iyo waxyaabo kaloo badan gudaha Docker oo ku yaal Raspberry Pi.
Haddii aadan wali aqoon u lahayn Docker, waa inaad ogaataa inay tani tahay mashruuc il furan qalabayn ku dirida arjiga kombiyuutarrada ku dhex jira, Iyadoo la siinayo lakab dheeri ah oo farsamaynta farsamaynta iyo otomatiga guud ahaan nidaamyada hawlgalka badan.
Docker wuxuu adeegsadaa astaamaha go'doominta kheyraadka ee kernel Linux, sida cgroups iyo magacyada boosaska (magacyada) si loogu oggolaado "konteenarro" kala gooni ah inay ku dhex shaqeeyaan hal tusaale oo Linux ah, iyadoo laga fogaanayo dusha sare ee bilaabidda iyo dayactirka mashiinnada farsamada.
1 Diyaarinta Raspberry Pi
2 Ku rakib Docker dusha Raspberry Pi
Diyaarinta Raspberry Pi
Ku rakibidda Docker dusha 'Raspberry Pi' ma aha wax guriga lagu qoro iyo rakibisteeda waa wax fudud. Casharkaan Waxaan aasaas ahaan u qaadan doonnaa nidaamka rasmiga ah ee Raspberry-keena oo ah Raspbian.
Haddii aadan wali haysan nidaamkan lagugu rakibay Raspberry-kaaga, waxaad la tashan kartaa qodobka soo socda halkaasoo aan ku sharaxeyno sida loogu sameeyo qaab fudud oo fudud. Xiriiriyaha waa kan.
Horeyba Raspbian ayaa loogu rakibay dusha Raspberry, waxaan cusbooneysiineynaa xirmooyinka iyo keydka bakhaarka ee APP ee Raspbian oo leh amarka soo socda:
Hadda, waa inaad cusbooneysiisaa dhammaan baakadaha software-ka ee laga helay Raspbian. Tan awgeed waa inaan fulino amarka soo socda:
Waqtigan xaadirka ah, xirmooyinka barnaamijka ayaa u baahan in la cusbooneysiiyo.
Hadda, waa inaad ku rakibtaa madax-kernel-ka nidaamka qalliinka. Tani waa muhiim, maxaa yeelay haddii aadan rakibin madaxyada cirifka, Docker ma shaqeyn doono.
Si loo rakibo madax-madaxeedyada, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ku maamushaa amarka soo socda barta:
Iyada oo dhammaan kor ku xusan diyaar yihiin, waxaan hadda u sii gudbi karnaa rakibaadda Docker ee aan ku leenahay Raspberry Pi, maadaama aan gebi ahaanba hubnaa inaan haysanno dhammaan xirmooyinka la cusbooneysiiyay ee nidaamka.
Ku rakib Docker dusha Raspberry Pi
Ku rakibida Docker Waxaan ku sameyn karnaa annagoo ku fulinayna amarka soo socda galka:
Nidaamkan soo degsashada iyo rakibidda ah ayaa qaadan kara muddo, markaa waxaan kuu soo jeedinayaa inaad waqtigaaga qaadato.
Iyadoo lagu rakibayo Docker nidaamka Raspberry Pi, hadda waxaan ku bilaabaynaa shaqada hirgelinta Docker si aad u isticmaali karto.
Tan tan ugu horeysa waa kudar adeegsadeheena nidaamka "pi" (Raspbian default) kooxda docker. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto oo aad maamusho weelasha, sawirrada, mugga, iwm. docker aan lahayn sudo ama mudnaanta superuser.
Haddii ay abuureen isticmaale kale, waa inay ku beddelaan "pi" magaca adeegsigooda taliska. Si loogu daro isticmaalaha pi ee kooxda Docker kaliya waa inay maamulaan amarka soo socda:
Isbedelkan hadda ayuu sameeyay, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la sameeyo dib u bilaabida nidaamkeena, si isbedelada la sameeyay loogu shubay bilowga nidaamka isla markaana lagu daro kooxdeena isticmaale ee 'Docker'.
Waxay dib u bilaabi karaan nidaamkooda iyagoo ku shaqeynaya amarka soo socda ee terminal:
Marka nidaamka dib loo bilaabo, mar labaad ayaynu geli doonnaa oo waxaan furi doonnaa terminal. Dhexdeeda waxaan ku fulin doonnaa amarka soo socda Xaqiiji rakibida Docker iyo inay horeyba ugu shaqeyneyso nidaamka:
Sida aad u arki karto, Docker wuxuu si fiican uga shaqeynayaa kanaga Raspberry Pi horeyba.
Hadda waa inaad hirgelisaa weelkaaga ugu horreeya. Si tan loo sameeyo, waxaad ka raadin kartaa mid ka mid ah bogga Docker, oo ay ku jiraan codsiyo badan. Xiriiriyaha waa kan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sidee loo rakibaa Docker on Raspberry pi leh Raspbian?
Nooca cusub ee Kdenlive 19.04 ayaa yimid oo kuwanu waa warkiisa